Bishnu Sharma: साझा बसलाई महिला ड्राइभर र खलासी चाहियो रे !
हरिहर भवन–त्रिपुरेश्वर–रानीपोखरी–कमलपोखरी–गौशाला–कोटेश्वर–सातदोबाटो–लगनखेल (१६.५ किमी) र सातदोबाटो, लगनखेल, जावलाखेल, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालिमाटी र कलंकी (१६.४ किमी)मा साझा चल्नेछ । माओवादी द्वन्द्वको बेला विस्थापित भएको नीलो रङको गाडी साझा माओवादी सरकारमै भएको बेला चल्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरबाट साझा चलाउने घोषणा गरेका थिए ।
सस्तो र भरपर्दो यातायात भनेर चिनिएको साझालाई लिएर गीत पनि बनेका छन् । चलचित्र ‘फिलिम’मा हरिवंश आचार्यले ‘साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, क्लिन्डरले २ रुपैंयाको टिकट काट्दछ’ भनेर गीत गाउँदै साझाको लोकप्रियता दर्शाएका छन् । तपाईं पनि साझा चढ्न काठमाण्डू आउने होइन ?
Posted by Sharma Bishnu at 2:58 AM